Sintomy Dornier Do328 Turbo ho an'ny FS2004
Fa ny FSX vahaolana azo itokisana kitiho eto
Ny fototra Do328 nanidina voalohany tamin'ny Desambra 6 1991, ka niditra tao amin'ny fanompoana ara-barotra tamin'ny Oktobra 1993. Ny vaovao 328 fuselage avela ho mampahazo aina 3-abreast seza, ny mety ho 4-abreast fanahafana. Mitambatra ny supercritical elatra nitombo avy ny Do Dornier 228, izany nomeny ny 328 Cruise tsara sy mananika fahaiza-manao.
Ao 2005, ny Aostraliana Maritime Safety Authority (AMSA) nahazo ny fifanarahana ho AeroRescue ho lavitra Search sy Rescue (SAR) fahaizany manodidina Aostralia. Dimy 328-100s tsikelikely ireo nirahina avy tany Aprily 2006 ho Febroary 2007 sy nametrahany manodidina ny morontsiraka Aostraliana mba hanome ny 24 ora, minitra valin'ny 30 fahaizany.
Tamin'ny volana Janoary 2008 mitontaly 80 Dornier 328-100 fiaramanidina nijanona tao airline fanompoana. Ampidiro 3 repaints, fonosana tanteraka tsara kalitao
Downloads 7 393
Nohavaozina taminy 13-02-2018